Miyuu Trent Alexander-Arnold Si Rasmi Ah U Sii Xaqiijistay Abaal Marinta Da'yarka Sanadka Ee Premier League Ugu Fiican? - Gool24.Net
Miyuu Trent Alexander-Arnold Si Rasmi Ah U Sii Xaqiijistay Abaal Marinta Da’yarka Sanadka Ee Premier League Ugu Fiican?
Difaaca midig ee kooxda Liverpool ee Trent Alexander-Arnold ayaa gool cajiib ah ka dhaliyay kulanka Chelsea isaga oo kulankii labaad oo xidhiidh ah ee Premier league darbo laaga xorta ah gool kaga dhaliyay Blues.
Trent Alexander-Arnold ayaa goolhaye Kepa kaga yaabsaday gool cajiib ah kadib markii uu dhaliyay goolka labaad ee Reds ee kulanka Anfield, laakiin waxaaba goolkan loo arki karaa in uu yahay mid da’yarkan u xaqiijin kara abaal marin muhiim ah.
Trent Alexander-Arnold waxaa loo arkaa in uu yahay xidiga ugu cad cad ee abaal marinta da’yarka sanadka ee horyaalka Premier league ugu fiican laakiin xogtiisa ayaa u sii damaanad qaadaysa in uu abaal marintan heli doono.
Goolhaye Kepa ayaa ceeb wayn kula kulmay in markii labaad uu badbaadin kari waayay kubbad laaga xorta ah oo uu Trent Alexander-Arnold tuuray iyada oo hore uu xidigan reer England kubbad laaga xorta ah uu gool ugu soo dhaliyay kulankii Stamford Bridge ee horaantii xili ciyaareedkan.
Xogta loo diwaan galiyay xili ciyaareedkan Trent Alexander-Arnold ayaan marnaba la rumaysan karin in uu yahay difaac midig wuxuuna ceebeeyay xidigaha khadka dhexe ee Premier League marka laga reebo Kevin De Bruyne oo isna u sharaxan xidiga sanadka ee Premeir league ugu fiican.
Trent Alexander-Arnold ayaa dhaliyay goolkiisii 4 aad ee Premeir League ee xili ciyaareedkan wuxuuna soo sameeyay 12 gool caawin taas oo la micno ah in uu ku soo lug yeeshay 16 gool oo Premier league ah.
Haddii uu Trent Alexander-Arnold yahay xidig khadka dhexe ah waxaa loo aqoonsan lahaa in uu yahay ciyaartoy khadka dhexe ah oo heer caalami ah balse waxa uu xogtan gaadhay isaga oo difaac midig ah taas oo ka sii dhigaysa mid ka sareeya heerkii laga filan karayay.
Trent Alexander-Arnold waxaa lagu qiimeeyaa difaaca midig ee kubbada cagta England waqti xaadirkan ugu fiican laakiin waxa uu u muuqdaa in uu noqday mid ka mid ah hal abuurka ugu fiican ee Premeir League.
Goolka laaga xorta ahaa ee uu Trent Alexander-Arnold sida layaabka leh uu Kepa ugu garaacay waxa uu u sii xaqiijinayaa in uu hanan doono abaal marinta da’yarka sanadka ee Premier League ugu fiican.